ကလိုစေးထူး: April 2007
Posted by ကလိုစေးထူး at 10:37 PM2comments
Posted by ကလိုစေးထူး at 8:48 PM3comments
Posted by ကလိုစေးထူး at 9:04 PM3comments
Posted by ကလိုစေးထူး at 7:37 PM 8 comments
Posted by ကလိုစေးထူး at 9:29 PM 1 comments
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်က `ကျေးဇူကန်းသူများ.. သို့´ ဆိုတဲ့ ပို့စ်ကို ရေးသားပြီး ဘလော့ဂ်မှာ တင်ခဲ့ပါတယ်။
ရေးသားခဲ့ရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုတော့ အဲဒီပို့စ်ထဲမှာ ပါပြီးသားပါ။
အဲဒီပို့စ်ကို ဖတ်မိတဲ့ ညီမငယ်တယောက်က ပဒုမ္မာဖိုရမ် မှာ လင့်ခ် ချိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါကို ဖတ်မိတဲ့ ရုရှနိုင်ငံရောက် ကိုမင်းမောင်က ကျနော်ရေးတာတွေကို မကျေလည်တာကြောင့် ပြန်လည်ချေပခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်..၊ ပုဒုမ္မာဖိုရမ်က အဲဒီတော့ပစ်လေးကို စတင်ဖွင့်ပေးခဲ့သူနဲ့ ၀ိုင်းဝန်းအားဖြည့်နေသူတွေရဲ့ မူရင်းရည်ရွယ်ချက်ကနေ ကျနော့်စာတပုဒ်ကြောင့် သွေဖည်သွားမှာကို စိုးရိမ်တာက တချက်၊ အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ၀င်ရောက် ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့ ဖိုရမ်တာဝန်ရှိသူကို လေးစားသမှု ပြုခြင်းက တချက်ကြောင့် အဲဒီဖိုရမ်က အချက်လက်တွေကို ဒီမှာ တင်ပြပါရစေ။
QUOTE(s0wha1 @ Apr 20 2007, 04:00 AM)
စိတ်ဝင်စားရင် အဲ့ဒီလင့်ခ်မှာ သွားဖတ်ကြည့်ပါ...ဒီမှာ copy/ paste လုပ်ဖို့ကို Admin တွေက ခွင့်ပြု၊ မပြု မသေချာလို့ လင့်ခ်ပဲ တင်လိုက်ပါတယ်...http://klosayhtoo.blogspot.com/2007/04/blog-post_19.html
ဒီဘလော့ကိုဒီဖိုရမ်မှာလာတင်တဲ့ အတွက်ဒါကိုရေးတာပါ.... မင်းတို့ တွေရေးချင်ရင်.....နာမယ်တပ်ရေးပါ.... မင်းပြောတဲ့ ၂၀၀၀ ပြည့် နှစ်မှာ ငါတပ်ထဲမှာ ..ဗိုလ်အဆင့်နဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီ မင်းပြောသလိုမျိုး ငါတို့တပ်ထဲမှာ....ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်..နာမယ်ကို ဘယ်လိုခေါ်ရမယ် ဆိုတဲ့ ...အမိန့် မျိုးစည်းကမ်းမျိုး မထုတ်ထားဘူး.....မင်းတို့ တွေမသိပဲ နဲ့ ချဲ့ ကား ရေးသားဖေါ်ပြနေကြလို့ တစ်ခြားသူတွေ အမြင်တစ်မျိုးဖြစ်နေမယ်....မင်းတို့ တွေ ဘာမှမသိတဲ့ ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်းတွေ... အကြောင်းကိုလည်း... မဟုတ်မမှန်တာတွေနဲ့ ထည့်သွင်းမရေးပါနဲ့.....မင်းတစ်ကယ်သိချင်ရင်...... ကိုယ်တိုင်ဗိုလ်သင်တန်းတက်လိုက်ပါ.... မှတ်ထားမသိရင်ပြောပြဦးမယ်.... ဗိုလ်သင်တန်းမှာ လက်တလောကာလဖြစ်ပျက်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးကိုမသင်ဘူး...စစ်ကျောင်းဆိုတဲ့ အတွက်သာ.. စစ်ပညာပါသင်တဲ့ သဘောရှိတယ်.... ကျန်တာကတော့ အပြင်ကျောင်းတွေနဲ့ ဘာမှမထူးခြားဘူး..။ အေး... လူဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်...... မင်းတို့ တွေထဲမှာလည်း...စစ်တပ်ကိုကြိုက်တဲ့ သူရှိသလို ..မကြိုက်တဲ့ သူတွေရှိမှာပဲ... ဒါကိုငါဘာမှမပြောချင်ဘူး...ငါပြောချင်တာက.... မင်းတို့ တွေ..တွေ့ တဲ့ လူအမျိုးမျိုးထဲက တစ်ယောက်အတွက်နဲ့ .....မင်းတို့ မကြိုက်တဲ့ အရာကိုဆွဲယူပုတ်ပြီး... တပ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်မယ် စစ်ကျောင်းမှာဘာတွေသင်တယ်လို့ .....အထင်နဲ့ ရမ်းသန်းမှန်းသန်းပြီး....သိမ်းကြုံးပြီး မစော်ကားကြနဲ့.......စကားလုံးယဉ်ကျေးပြီး....အတွေးအခေါ်မိုက်ရိုင်းမှုမျိုးမလုပ်ကြနဲ့......။
မင်းတို့ တစ်ကယ်ရေးချင်ရင်...နာမယ်တပ်ပြီးရေးစမ်းပါ.... ငါအားပေးပါတယ်...မင်းတို့ အဲလိုရေးလို့ ကာယကံရှင်လည်း ဒီဖိုရမ်ကိုမ၀င်နိုင်ပါဘူး....ဒါကိုမသိနိုင်ပါဘူး....အေးဒါပေမယ့်...ငါတို့ တွေသိနေမြင်နေရတာကတော့.... မင်းတို့ ဟာ ကိုယ်လည်းတစ်ကယ်သေချာမသိတဲ့ အရာနဲ့ အားလုံးကိုပုတ်ခပ်ချင်တယ်....... ကြားဖူးနားဝနဲ့ ပေါက်တတ်ကရလျှောက်ပြောချင်တယ်....။ မင်းတို့ သိပ်ချစ်တဲ့ သိပ်လေးစားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းစကားကိုငါရေးပေးခဲ့ မယ်....
ဗမာတွေစိတ်ထက်သလေးဘာလေးနဲ့ တစ်လွဲဆံပင်ကောင်းနေကြတယ် ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရအောင် လုပ်ရတဲ့ တိုက်ပွဲမျိုးမှာအသုံးမချဘူး ဗမာပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာအသုံးမချဘူး ဗမာဗမာချင်းချဖို့ မှာလုပ်ချင်တယ်.. ဒါမျိုးတွေလုပ်ချင်လို့ ဘယ်တော့မှအကျိုးမရှိဘူး။
အဲတော့ဂုဏ်ပုဒ်တွေကိုချီးကျူးတာကောင်းပါတယ်......အေးအဲလိုပဲ..ကိုယ်လေးစားချစ်ခင်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ စကားတွေကို... လိုက်နာဘို့ ကြိုးစားကြဖို့ လိုအပ်တယ်....။ နောက်ပြီးမှတ်ထား....သမိုင်းဆိုတာ ဘယ်တော့မှ ဖျောက်ဖျက်ပြစ်လို့ ရတဲ့ အမျိုးမဟုတ်ဘူး..။ မင်းတို့ ဒီမှာတစ်စုတစ်စည်းထဲဖြစ်အောင် လာတင်ပေးတာကိုကျေးဇူးတင်တယ်.... အားပေးတယ်...။ အေးအဲလိုပဲ.....မင်းတို့ တွေဗိုလ်ချုပ်ကိုခုတုံးလုပ်ပြီး....... တစ်ခြားသူတွေပါ..ပါဝင်ပါတ်သပ်နေမယ့်....တပ်မတော်ကိုတော့မစော်ကားနဲ့..... တပ်မတော်ဆိုတာ...ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ ဦးဆောင်ပြီးဖွဲ့ စည်းခဲ့ တဲ့ နိုင်ငံအတွက်လိုအပ်လို့ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အဖွဲ့ အစည်း.... ဟိုးအရင်..ကတည်းက..နိုင်ငံအတွက်အသက်ပေးလာတဲ့ သူတွေအများကြီး.... အခုထိလည်းအသက်ပေးနေကြရတုန်းပဲ.....
ဒီဖိုရမ်ရဲ့ ယူဇာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုကိုမောင်တော်တော်ဆိုးရဲ့ ယောက်ဖတော်စပ်သူကိုယ်တိုင်...၂၀၀၀ ပြည့် နှစ်မှာတိုက်ပွဲကျသွားရတယ်.. အဲဒီသူဟာ..ငါနဲ့ ဗိုလ်သင်တန်းတစ်ပါတ်စဉ်ထဲအတူတူတက်ခဲ့ တာ ....။ အေးဒါဟာ...မင်းတို့ သိနိုင်လောက်တဲ့ သူကိုပြောပြတာ....ငါ့အပါတ်စဉ်မှာ နိုင်ငံအတွက်အသက်စွန့် သွားရတဲ့ သူတွေ ခြေထောက်ဖြတ်လိုက်ရတဲ့ သူတွေအ..များကြီး....မင်းတို့ ဒါတွေသိရဲ့ လား... မင်းတို့ တွေ..ဒီလိုအင်တာနက်ပေါ်မှာ...အေးအေးဆေးဆေး..အတင်းတုတ်နေနိုင်ဖို့ အတွက်.. တစ်ချို့ ချို့ သော..........တပ်မ တော်သား တွေ အသက်ပေးနေရတာရောသိလို့လား.... ငါတို့ တွေမှာ.. တာဝန်ဟာ ၂၄ နာရီအပြည့် ရှိနေတယ်...ဒီခံယူချက်တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်နေကြတာ..... လာပြီးအားလုံးကိုသိမ်းကြုံးပြီး မစော်ကားနဲ့....။မင်းတို့ သိပ်ပြီးတိုက်ခိုက်နေချင်ရင်..... နာမယ်အတိအကျ အပါတ်စဉ်အတိအကျ... ဘယ်ကျောင်းဆင်းဆိုတာပါ ရေးလိုက်ဦးဟုတ်ပြီလား....
အဲကောင်လေး ဘယ်သူဆိုတာ ငါသိတယ်....ဘယ်သူ့ ရီးစားဆိုတာလည်း ငါသိတယ်.... လူဆိုတာ အမြင်အမျိုးမျိုး ရှိကြတာကို သဘောပေါက်... ကျန်တဲ့ သူတွေကို သိမ်းကြုံးပြီးမစော်ကားမိအောင် ဂရုစိုက်...။ မင်းတို့တွေ နိုင်ငံတော်အတွက်....သွေးတစ်စက်မပြောနဲ့ ချွေးတစ်စက်တောင် မထွက်ဖူးပဲနဲ့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် စကားလုံးတွေနဲ့ အင်တာနက်မှာ...ပေါက်တတ်ကရလာမပြောနဲ့....။ မင်းတို့ နိုင်ငံတော်ကိုတစ်ကယ်ချစ်ရင်... ဗိုလ်ချုပ်ကို တစ်ကယ်ချစ်ရင်... ကြိုးစားပါ... မင်းတို့ ကြိုးစားမှုနဲ့ နိုင်ငံတော်ကြီး မိုးပျံသွားတယ်ဆိုရင်ကွာ...ငါတို့ တွေ အကုန်လုံးဝိုင်းပြီး လက်ခုပ်တီးပြီးအားပေးမှာပါ...။ အခုလိုမျိုးတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မကောင်း ပြောတိုက်ခိုက်နေပြီးတော့.. နိုင်ငံကြီးမတိုးတက်တာ... ဟိုလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်ပြောလာတာလည်း ကြာခဲ့ ပါပြီ...။ ဒီစိတ်ဓါတ်တွေကို ဗိုလ်ချုပ်မြင်ခဲ့လို့ ဒီသောက်သုံးမကျတဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေမလုပ်စေချင်လို့ အပေါ်မှာ ငါရေးထားခဲ့ တဲ့ အတိုင်းပြောခဲ့တာ... ဒီစိတ်ဓါတ်တွေဟာ ဗိုလ်ချုပ်ဖျောက်စေချင်ခဲ့ တဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေ..။ အနှစ် ၆၀ ပြည့် တော့မယ်.... ဗိုလ်ချုပ်မှာခဲ့ တာ... အခုထိတောင်မပျောက်နိုင်သေးဘူး..... အရင်က.. အပြင်မှာလူလူချင်း တိုက်နေရတယ်... နောက်စာရွက်တွေပေါ်လာတော့ စာရွက်တွေပေါ်..စာနယ်ဇင်းတွေပေါ်.. အခု..အင်တာနက်ပေါ်မှာတောင် ဒီသောက်ကျင့်တွေကမပျောက်သေးဘူး..။ အကျိုးမရှိတဲ့ အလုပ်တွေမလုပ်ချင်ပါနဲ့.... မြန်မာပြည်ကောင်းစားဖို့ ဆိုတာ.. မြန်မာလူမျိုးတွေ.. အထူးသဖြင့်.. လူငယ်တွေအားလုံး စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ကြိုးစားမှကောင်းမှာပါ... နောင်အနာဂါတ်အတွက်.... အခုအချိန်ကစပြီး သွေးမကွဲချင်စမ်းပါနဲ့... သွေးခွဲဖို့လည်း မကြိုးစားစမ်းပါနဲ့.... နိုင်ငံတစ်ခုမှာ.... တပ်မတော်ဆိုတာ လိုအပ်တဲ့ အဖွဲ့ အစည်းပါ... ဒါကိုနားလည်အောင်လုပ်ပြီး.....လူတစ်ဦးတစ်ယောက်မကောင်းရင်.. လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုပဲ ပြောပါ.... တပ်မတော်ကို..ထိခိုက်တဲ့ စကားလုံးတွေမသုံးပါနဲ့..။ အဲလိုပဲ... ကိုယ်တစ်ကယ် ကြိုးစားရမှာကိုလည်း..... မေ့မနေကြပါနဲ့....။ ငါပြောချင်တာကတော့ဒါပဲ..။
ရေးသားထားချက်တွေကတော့ ဒေါသံတွေဆူပွက်နေတဲ့ ရေနွေးအိုးကြီးတလုံး ကို မီးနဲ့ မြိုက်ထားတာကို တွေ့လိုက်ရသလိုပါပဲလား။ ကျနော့်ကို ဒီလိုမျိုး တယောက်ယောက် ရေးလာမယ်လို့တော့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ ဒီလောက်တောင် ရှူးရှူးရှားရှားဖြစ်နေမယ်လို့တော့ မထင်မိခဲ့ပါဘူး။ အရင်ဆုံး ပြန်မဆွေးနွေးခင် ကိုမင်းမောင်ကို တခုပြောချင်တာက အခု ကိုမင်းမောင်က ပြန်လည်ပြီး အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ချေပ ဆွေးနွေးနေတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ငါပြောနေတာမှ အမှန်ဆိုပြီး သဟောက်သဟမ်းလုပ်ချင်နေတာလားဆိုတာ အရင်သိချင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကိုမင်းမောင် ရေးသွားတဲ့ အချက်တွေထဲမှာ မိမိနဲ့ အမြင်မတူသူကို လေးစားမှု လုံးဝမရှိတာကို သတိထားမိပါတယ်။ လူဆိုတာ တယောက်နဲ့ တယောက် အပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိရပါတယ်။ ဒါက လူ့ကျင့်ဝတ်ပါ။ အဲဒါလေးကို အရင် သတိချပ်စေချင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ ကိုမင်းမောင်ဟာ ကိုမင်းမောင်လို အမြင်မရှိရင် ဒီလိုပဲ ပြောလေ့ရှိပါလားလို့ ခံယူတဲ့အတွက် နောက်ထပ် ဆွေးနွေးစရာ အကြောင်းမရှိပါ။
နာမည်အတိအကျ တပ်မရေးခြင်းဟာ စည်းစောင့်ခြင်းတခုပါ။ ဒါပေမယ့် သူပြောလိုက်တဲ့ စကားတခွန်းကြောင့် တပ်မတော်တခုလုံးရဲ့ အမြင်ဟာ ဒါပါလားဆိုတဲ့ သဘောသဘာဝကို သက်ရောက်နေလို့ အဲဒီစာကို ရေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ်လေးကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအရ ထိခိုက်စေလိုခြင်းမရှိတာကြောင့် နာမည်တပ်မရေးတာပါ။ နာမည်တပ်ရေးလိုက်ရင် ကျနော်ဆိုလိုချင်တဲ့ အချက်၊ ကျနော်ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့က ဆောင်းပါးထဲမှာ ပါတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုမင်းမောင် စာကို ဒေါသတွေဖျောက်ပြီး အသေအချာ ထပ်ဖတ်စေချင်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အဲဒီလိုခေါ်ရမယ်လို့ အမိန့် တရားဝင်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ ကျနော်မရေးခဲ့ပါ။ သူတို့ တပ်ရင်းအစည်းအဝေးမှာ ပြောခဲ့တယ်လို့သာ ရေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါဟာလည်း အဲဒီပြောတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ တဦးပိုင်အယူအဆ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ အဲဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေ တပ်မတော်ထဲမှာ ဘယ်လောက်များရှိနေမလဲ ဆိုတာ သိအောင် ထောက်ပြချင်လို့ အဲဒီအပိုဒ်ကို ထည့်ရေးပါတယ်။ ကိုမင်းမောင်က ဒေါသစိတ်နဲ့ သတိမမူမိတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ကျနော့်ကို ပြောချင်ဇောနဲ့ လိုရာဆွဲယူပြောတာလားဆိုတာတော့ အတတ်မသိနိုင်ပါ။
စစ်တပ်ထဲကလူ ပြောတယ်ဆိုရင် စစ်တပ်ကို အနည်းနဲ့အများတော့ ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ ရာထူးသေးရင် သေးသလို ကြီးရင် ကြီးသလိုပေါ့ဗျာ။ ဥပမာ ကိုမင်းမောင်က ဘိုမှူးဆိုပါတော့။ ဟာ.. စစ်တပ်ထဲက ဘိုမှူး မင်းမောင်က ဒီလိုပြောတယ်ဟေ့ လို့ လူတွေက ပြောမှာပါ။ အဲဒီကတည်းက စစ်တပ် ဆိုတဲ့ အသုံးက ပါကိုပါနေရပါပြီ။ အဲဒီတော့ အဲဒီကောင်လေး ပြောတဲ့ စကားဟာလည်း စစ်တပ်ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ တပ်မတော်ကိုတော့မစော်ကားနဲ့.....တပ်မတော်ဆိုတာ...ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ ဦးဆောင်ပြီးဖွဲ့ စည်းခဲ့ တဲ့ နိုင်ငံအတွက်လိုအပ်လို့ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အဖွဲ့ အစည်း..ကိုမင်းမောင်ဟာ စာကို သေချာစွာ ဖတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျနော်ရေးခဲ့တာဟာ တပ်မတော်ကို စော်ကားနေတာလား၊ တပ်မတော်ကို စော်ကားနေတဲ့ ယူနီဖောင်းဝတ်တွေရဲ့ နောက်လာမယ့် မျိုးဆက်တွေကို သူတို့လို စော်ကားနည်းတွေ သင်ပေးနေလေမလားလို့ တွေးဆချက်ကို ရေးတာလားဆိုတာ တွေ့နိုင်မှာပါ။
တပ်မတော်ကို မစော်ကားပါ။ အင်မတန်ချစ်ပါတယ်။ (သို့ပေမယ့် အခုလက်ရှိ တပ်မတော်ကိုတော့ မဟုတ်ပါ) ချစ်လွန်လွန်းလို့ တပ်မတော် နာမည်ပျက်အောင် ပြောဆို ရိုင်းပျမှုကို ထောက်ပြရေးသားခဲ့တာပါ။ စစ်တပ်ထဲဝင်ရင် စစ်တိုက်ရတယ်၊ စစ်တိုက်ရင် သေတာပျောက်တာ ဒဏ်ရာရတာတွေ ရှိမှာပါ။ စစ်ထဲဝင်လို့ စစ်တိုက်ရ၊ သေရတာ မဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဟိုးအရင်တုန်းက စစ်သားတွေ အသက်ပေးနေရတာနဲ့ အခုလက်ရှိ စစ်သားတွေ အသက်ပေးနေရတဲ့ ပုံစံချင်း၊ အနှစ်သာရချင်းကတော့ တခြားစီ ဖြစ်နေပါပြီ။ ဟိုးအရင်က နိုင်ငံတော်လွတ်လပ်ဖို့၊ တနည်းအားဖြင့် နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်ဖို့။ အခုကတော့ အာဏာကို ကာကွယ်ဖို့ ကိုယ့်အချင်းချင်း သတ်ရင်း အသက်ပေးနေရတာပါ။ အနှစ်သာရခြင်း ဘာမှ မဆိုင်ပါ။
အဲဒီလိုသာ ပြောကြကြေးဆိုရင် ကိုမင်းမောင် အခုလို ကျနော်တို့ ရေးသားချက်ကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက် ရှေ့တန်းမှာ သေနေရတဲ့ စစ်သားတွေ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိနေမလဲ ပြန်ပြောလို့ရပါတယ်။ အခုလို ကိုမင်းမောင် ရုရှမှာ တိုင်းပြည် ဘဏ္ဍာတော်နဲ့ အခန့်သား ပညာသင်နေရတာ ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေ ပေးခဲ့တဲ့ ငွေတွေဆိုတာလေးလဲ သတိချပ်စေချင်ပါတယ်။ လူဆိုတာ အမြင်အမျိုးမျိုး ရှိတယ်ဆိုတာကို ကိုမင်းမောင် မမေ့တာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော့်မှာလည်း စစ်တပ်က မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ မြောက်မြားစွာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်နဲ့ အမြင်မတူသူတွေကို အခုလို ယမ်းပုံမီးကျ ဂမူးရှုးထိုးနဲ့ ဟိန်းလားဟောက်လား လုပ်လေ့ရှိရင်တော့ ပြောရတာ မကောင်းလှပါ။ ကိုမင်းမောင် တယောက်အတွက်နဲ့ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တဲ့ တခြားသော စစ်ဘိုတွေကို မထိခိုက်စေချင်ပါဘူး။
မိမိထင်မြင်ချက်ကို လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ရေးသားတာကို အင်တာနက်မှာ အတင်းတုတ်တယ်လို့ လူကြီးလူကောင်းမဆန်စွာ သတ်မှတ်ရင်တော့ မြန်မာပြည်ထုတ် သတင်းစာတွေမှာ ပါနေတဲ့ ဆောင်းပါးတွေကိုရော ဘယ်လို သတ်မှတ်မလဲလို့ မေးချင်ပါတယ်။ မင်းတို့ ငါ့တို့ကို ကြိုက်ရင်ကြိုက်၊ မကြိုက်ရင်တော့ ဘာမှ မရေးနဲ့လို့ ပြောချင်နေတာလား..။ စဉ်းစားစရာပါပဲ။ အကျိုးမရှိတဲ့ အလုပ်တွေဆိုတာကိုလည်း ပြောချင်နေပါသေးတယ်။ ကိုမင်းမောင်လုပ်နေတာက ဘယ်သူ့အကျိုးလဲလို့ မေးရင်။ ဟ..နိုင်ငံအတွက်၊ ပြည်သူအတွက်လို့ ဖြေမှာ ကျနော်သိနေပါတယ်။ လူတိုင်း ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ်ချစ်ပါတယ်။ ကျနော်လည်း ချစ်ပါတယ်။ ကိုမင်းမောင်က ကိုမင်းမောင်လုပ်နေတာ နိုင်ငံအတွက်လို့ ယူဆသလို ကျနော်ကလည်း ကျနော်လုပ်နေတာ နိုင်ငံအတွက်လို့ ယုံကြည်ထားပါတယ်။ ကိုမင်းမောင်ပြောသလိုပေါ့ဗျာ။ အမြင်ချင်းတော့ ဘယ်တူနိုင်ပါ့မလဲ။ ဒါပေမယ့် စစ်သားလုပ်မှပဲ နိုင်ငံအတွက်လို့ မမည်ပါဘူး။ စစ်တပ်ထဲ ၀င်နေသူတွေကသာလျှင် နိုင်ငံ့ကို ချစ်သယောင်ယောင် ပြောနေတာကို ဖတ်ရတော့ ပြုံးချင်မိပါတယ်။
ရေးခဲ့တာလည်း အတန်ငယ်များပါပြီ..။ နိဂုံးချုပ်ပြောရရင် တဦးတယောက်ကိုပဲ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ရည်ရွယ်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာက လူသိမ်လူမွှားတွေရဲ့ အလုပ်လို့ ကျနော်ခံယူထားပါတယ်။ ကျနော်ရေးခဲ့ခြင်းဟာ အနှီပုဂ္ဂိုလ်လေးကို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအရ ထိခိုက်စေလိုတဲ့ စိတ်မရှိပါ။ ဒါပေမယ့် သူပြောလိုက်တဲ့ စကားတခွန်းအရ ကိုမင်းမောင်တို့လို နိုင်ငံကို သိပ်ချစ်၊ နိုင်ငံအကျိုး သိပ်သယ်ပိုးတဲ့ တပ်မတော်စစ်ဘို ပညာတတ်ကြီးများကိုပါ မထိခိုက်စေလိုလို့ ရေးခဲ့ပါတယ်။ အပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိသော ဆွေးနွေးချက်များကို ရင်ဖွင့်ကြိုဆိုလျက်..။
QUOTE(klosayhtoo @ Apr 21 2007, 01:37 PM)
မင်းငါရေးတဲ့ စာကိုဖတ်လိုက်မိတာကို..... ကောင်းပါတယ်... မင်းဖတ်မိသွားရင် အေးဆေးပါ... ( မင်းနဲ့ ငါရေးတာက မင်းငါ့ထက်ငယ်မယ်လို့ ခန့် မှန်းမိလို့ ပါ ) လေးစားလို့ မလေးစားလို့ မဟုတ်ဘူးနော်....၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာ တတိယနှစ်ကျောင်းသားလို့ မင်းရေးထားတာတွေ့ လိုက်လို့ ဒီလိုသုံးလိုက်တာ။ နောက်ပြီး မင်းရေးတာတွေကလည်း အထင်နဲ့ မှန်းတုတ်ထားတာတွေဖြစ်တဲ့ အတွက်... မှန်းတုတ်ရမ်းတုတ်တွေ ပေါ်လွင်အောင်ပဲရေးပေးလိုက်တာပါ... ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာကတော့..... မဆွေးနွေးတာကောင်းပါတယ်..။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့.. မင်းကရမ်းတုတ်တ့တ်တဲ့ အကျင့်နဲ့ စာရေးနေတာကိုတွေ့ တယ်လေ..။ နောက်ပြီး..ငါဒီစာကိုရေးတာ... ဒေါသတွေဆူပွက်ပြီးရေးတာာမဟုတ်ဘူး...ငါ့ရေးတဲ့ ပုံစံကဒီအတိုင်းပဲ...
မင်းဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမိန့်ခွန်းတွေ နားထောင်တယ်မှတ်လား.... ဒေါသထွက်နေသလိုမျိုး ပြောနေတာ... အဲတာပညာသံလို့ ခေါ်တယ်..။ လောကမှာ အသံဆင်တူတာတွေရှိတယ်... ပညာသံရယ်..ဒေါသသံရယ်..။ နောက်ပြီး..မေတ္တာသံရယ်..ေ လာဘသံရယ်ဆင်တူတယ်....။ အဲတော့..ပြတ်ပြတ်သားသားပြောနေလို့ ဒေါသလို့ မထင်လိုက်နဲ့ကွာ.. ချိုချို..ချိုချိုပြောနေလို့လည်း မေတ္တာလို့ မယူဆပါနဲ့ ညီလေးရေ..။
မင်း ပေါက်တတ်ကရ ရမ်းပြောတာလောက်နဲ့တော့.. ငါ ဒေါသမထွက်ပါဘူးကွာ..အေးဆေးပါ....။ အဓိက..ကတော့ အားလုံးကြိုးစားကြဖို့ လိုတာပါ..... ဒီလို ကြိုးစားဖို့အတွက်... တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး စည်းစည်းလုံးလုံး ဖြစ်နေမှရမှာပါ.... ဒီတော့ လူငယ်အချင်းချင်း သွေးမကွဲချင်စမ်းပါနဲ့ကွာ.... အနာဂါတ်မှာ မင်းတို့ငါတို့ ပုခုန်းချင်းဖက်ပြီး နိုင်ငံအတွက် ရုန်းကြရဦးမှာပါ...။ မင်းငါတို့နဲ့ တူတူ မရုန်းချင်လည်း ရတယ်နော်... အခုလိုပဲ ဘေးထိုင်ဘုပြောပြီးနေ.. နေလည်းအေးဆေးပါ...။
ကိုမွန်းစတားပြောစကားအရ ဆိုရင်တော့ ကိုမင်းမောင်က ကျနော့်ထက် ငယ်ရွယ်တာ သိနေပေမယ့် ကျနော် ပြောခဲ့ပြီးသလို လူအချင်းချင်း လေးစားရမယ့် လူမှုဝတ္တရားကြောင့် ကိုမင်းမောင်လို့ ခေါ်ပါမယ်။ (နောက်နောင် ရင်းနှီးလာလို့ ညီလေးမင်းမောင်လို့ ခေါ်ပြီး မင်းနဲ့ ငါနဲ့ သုံးစွဲကြတာက တမျိုးပေ့ါ) ၂၀၀၀ပြည့်နှစ်မှာ တတိယနှစ်လို့ ပြောခဲ့တာနဲ့တင် ကိုမင်းမောင်ထက် အသက်ငယ်ရွယ်တယ်လို့ ထင်တာကိုတော့ မရှင်းတော့ပါဘူး။ လူတယောက်နဲ့ တယောက် ဘ၀တွေက ရှင်သန်ရပ်တည်ရခြင်းက မတူတော့ တနှစ်တတန်း ကျောင်းမှန်မှန်တက်နိုင်လောက်အောင် အခြေအနေက ပေးချင်မှ ပေးမှာကိုး..။ ထားလိုက်ပါစို့.. အသက်ကြီးခြင်း.၊ ငယ်ရွယ်ခြင်းဆိုတဲ့ ကိစ္စကို။
နောက်ပြီးမင်းရေးတာတွေကလည်းအထင်နဲ့ မှန်းတုတ်ထားတာတွေဖြစ်တဲ့ အတွက်... မှန်းတုတ်ရမ်းတုတ်တွေ ပေါ်လွင်အောင်ပဲ ရေးပေးလိုက်တာပါ... ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာကတော့..... မဆွေးနွေးတာကောင်းပါတယ်..။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့.. မင်းကရမ်းတုတ်တတ်တဲ့ အကျင့်နဲ့ စာရေးနေတာကို တွေ့ တယ်လေ..။
အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ အထူးအထွေ မပြောလိုပါ။ စာရေးတယ်ဆိုတာ မိမိအမြင်၊ မိမိ အတွေး၊ မိမိခံစားချက်ကို ပုံဖော်ရေးသားတာဖြစ်လို့ မှန်တာတွေ ပါသလို အမှားလဲ မည်သူမှ ကင်းမယ် မထင်ပါ။ ကျနော်က ရမ်းတုတ်ရေးသားနေလား၊ ကျနော်ခံစားရ မြင်တွေ့ရတာကို စိတ်ကူးပုံဖော်ရေးသားနေတာလားဆိုတာ ဖတ်သူက အကဲဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုမင်းမောင် ဒီလို ထင်တာကိုလည်း ` မထင်နဲ့ကွ၊ ငါရေးတာကမှ အမှန်´ လို့ မပြောလိုပါ။ ကြိုက်ချင်လဲကြိုက်နိုင်သလို မကြိုက်ချင်ရင်လည်း လွတ်လပ်စွာ မကြိုက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ကျနော်ရေးတာကို ကိုမင်းမောင်က `ရမ်းတုတ်နေတာ´ လို့ မြင်ပေမယ့် တခြားသောသူက သူ့ခံစားချက်နဲ့ ယှဉ်ပြီး နှစ်သက်ကောင်းနှစ်သက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီအချက်ကို ကိုမင်းမောင် မဆွေးနွေးချင်သပဆိုလည်း သဘောပါပဲ။
ဒီစကားလေးကတော့ အတန်ငယ် ရင့်သီးတယ်လို့ ထင်လို့ ကန့်ကွက်ပါတယ်။ မိမိနဲ့ အမြင်မတူတာနဲ့ဘဲ ဘေးထိုင် ဘုပြောတယ်လို့ သတ်မှတ်တာ လူကြီးလူကောင်းတွေရဲ့ လုပ်ရပ်မဟုတ်ပါ။ ကိုမင်းမောင်ကို (အခုဆွေးနွေးနေတဲ့ အချိန်ထိ) လူကြီးလူကောင်း ပညာတတ်ကြီး တယောက်လို့ ကျနော်မြင်နေဆဲပါ။ ရုန်းပါ ကိုမင်းမောင်..။ တိုင်းပြည်ကြီးက ကိုမင်းမောင်တို့လို ပညာတတ်ကြီးတွေ ရုန်းလို့ ကောင်းလာရင် ကိုမင်းမောင်တို့ကို ဆန့်ကျင်တဲ့လူတွေကို ကျနော်က ထိပ်ဆုံးကနေ ပြန်ဆန့်ကျင်ပါမယ်။
နိဂုံးချုပ်ပြောရင် ကျနော် ဖိုရမ်ရေးလေ့မရှိပါ။ ရေးရင်လည်း စတာ နောက်တာတွေသာ ရေးတာ များပါတယ်။ ဖိုရမ်တွေမှာ ဟိုတော့ပစ်အောင် ငြင်းလိုက်၊ ဒီတော့ပစ်အောက် ငြင်းလိုက်လုပ်ပြီး လူတွေနဲ့ သဟဇာတ မဖြစ်တာကို မလိုလားတာကြောင့်ပါ။ ဒီတော့ပစ်ကိုတော့ တော့ပစ်ဖွင့်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တော့ပစ်အောက်မှာ အားဖြည့်ရေးသားသူ ညီအကို မောင်နှမတွေ အားလုံးကို လေးစားချစ်ခင်စိတ်နဲ့ လာရောက်ပူးပေါင်းပါတယ်။ အခုလို အချေအတင်ဖြစ်ရလို့ တော့ပစ်ရဲ့ မူရင်းရည်ရွယ်ချက်အောက်ကနေ သွေဖည်သွားမှာကိုတော့ မလိုလားတဲ့အတွက်.. ဒီလောက်ပါပဲ။
ကျနော်တို့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆွေးနွေးကြတာပေါ့...... ပထမဦးဆုံး ကျနော်ပြောချင်တာကတော့.... ကိုကလိုစေထူးရဲ့. အမြင်ဖြစ်တဲ့ စစ်ဘက်နဲ့ အရပ်ဘက်ဆိုတဲ့ ခွဲခြားချင်တဲ့စိတ်ကို အရင်ဖျောက်လိုက်ပါဦး.. ဒါမှကျနော်တို့တွေ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆွေးနွေးလို့ ရမယ်..။ ကျနော်တို့ တွေအားလုံး
မြန်မာနိုင်ငံသား လူငယ်တွေ.. တိုင်းပြည်ကိုချစ်ကြတဲ့ သူတွေ
ကြိုးစားချင်စိတ် အပြည့် ရှိတဲ့ သူတွေချည်းပါပဲ။ ဒါကိုတော့
ကျနော်အပေါ်က.. စကားလုံးမာမာတွေနဲ့ ရေးထားပြောထားတာကလည်း. ဒီလိုမျိုးခွဲခြားမှုကို လက်မခံလို့ ရေးထားတာ....
ဒီလိုမျိုး အုပ်စုကွဲစရာမလိုပါဘူး...။ အဲလိုလူငယ်တွေ.
အပြန်အလှန် တိုက်ခိုက်နေကြရင်... ဘယ်သူမှလည်းအကျိုးမရှိပါဘူး.....။ အခုဟာက ဘယ်သူက
တိုင်းပြည်ကိုပိုချစ်တယ်.. ဘယ်သူကတော့ ညာဝါးနေတယ်လို့ ဆိုလိုနေတာ မဟုတ်ပါဘူး.... ခွဲခြားမှုတွေလုပ်နေပြီး.... ရိချင်တာတိုက်ခိုက်ချင်တာ. ဒါတွေကိုမဖြစ်စေချင်တာပါ....။
ကိုကလိုစေးထူးပြောတဲ့ စကားလိုပေါ့... ဒီကောင်လေးကစစ်တပ်ကဖြစ်လို့.... ဒီကောင်လေးပြောတဲ့ စကားဟာ တပ်မတော်ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ ယူဆတယ်ထားပါတော့.. အဲလိုမျိုးလည်းယူဆပြီးရေးတယ်လို့ ကျနော်သိပါတယ်... ဒါကြောင့်သာလျှင်....စစ်ကျောင်းတွေမှာ သင်တာလား.... ၀ါဒတွေပဲရိုက်သွင်းခံရတာလားလို့ စမ်းတ၀ါးဝါးရေးမှုကိုတွေ့ ရပါတယ် အမှန်ကတော့... စစ်ကျောင်းတွေမှာ..... အဲလိုမျိုးလုံးဝမသင်သလို.. ဘာဝါဒမှလည်းရိုက်သွင်းတာလည်း မရှိပါဘူး.။ ဒီကောင်လေးဒီလိုပြောလို့ စစ်တပ်ကကောင်တွေ မိုက်ရိုင်းတယ်လို့ စွပ်စွဲရင်မှန်ပါ့မလား..။
ဥပမာ..ကျနော်ကတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကောင်းကြောင်း ပြောနေတယ်... ဒီကောင်လေးက.. မကောင်းကြောင်းပြောနေတယ်... ဟုတ်ပြီ.. ခင်ဗျားယူဆတာက... ကျနော်ကောင်းကြောင်းပြောတာသည်... ကိုယ်ပိုင်အသိရှိလို့.......ဟိုကောင်လေးပြောတာကျတော့...ရိုက်သွင်းခံထားရလို့ ဒီလိုဖြစ်နေတယ်...။
နေရာတိုင်းမှာ အသုံးမကျတဲ့သူရှိတယ်. ကျတဲ့သူရှိတယ်.. အမြင်အမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်.. ကြိုက်တဲ့ သူရှိနိုင်တယ်. မကြိုက်တဲ့ သူရှိနိုင်တယ်.... ဒီတစ်ယောက်ဒီလိုပြောတာနဲ့ တပ်မတော်ကြီးမှာရှိတဲ့ သူတွေဒီလိုလား..... ဆိုပြီး သိမ်းကြုံးပြီးပြောစရာ မလိုအပ်ဖူးလို့ ယူဆပါတယ်...တစ်ကယ်လို့ အရပ်သားတစ်ယောက် ဒီလိုပြောနေပြီဆိုရင်ကော.... ပြောချင်ပြောနေမှာပါပဲ.. နောက်ပြီး...အဲကောင်လေးအနေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို မကြိုက်ဘူးပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်နော်... ဒါကိုသွားတားလို့ မရဘူး....။ ဒါသူ့ လွတ်လပ်ခွင့်.. ဒီလိုပြောလို့ ဒီကောင်လေးနှင့်တကွသော.. တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ တပ်မတော်သားတွေကို အတူတူဆိုပြီးရောချနေတာကို.... လက်မခံတာ.။ ဒီကောင်လေးရဲ့ ပျော့ကွက်ကိုတပ်မတော်သား... တွေအကုန်လုံးရဲ့ ပျော့ကွက်အဖြစ်နင်းပြီး တင်ပြနေတဲ့ ပုံစံကိုလက်မခံတာ.... အဲတာကြောင့် နာမယ်အတိအကျ ရေးခိုင်းတာ..ခင်ဗျားအနေနဲ့ နာမယ်မရေးပဲ ပြောတော့... ကျန်တဲ့ တပ်မတော်သားတွေ ထိခိုက်တယ်...နောက်ပြီး ခင်ဗျားသိတယ်ဆိုတာ.. သူများတစ်ဆင့်ပြန်ပြောလို့ သိတာ.... နောက်ပြီး ဒါဟာတပ်မတော်တစ်ခုလုံးရဲ့ အမြင်မဟုတ်ဘူး.... ခင်ဗျားတို့ မိသားစုလေး ရှိပြီထားပါတော့........ ခင်ဗျားညီပြောတဲ့ စကားလုံးတွေဟာ.. ခင်ဗျားအဖေရဲ့ အမြင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး.. .သူလည်းသူပြောချင်ရာ ပြောမှာပဲ...ဒါတောင် မိသားစုပဲရှိသေးတယ်.. နောက်ပြီးတပ်မတော်ဆိုတာ. မတစ်ရာသားနဲ့ ဖွဲ့ စည်းထားတာ.. အမြင်ဆိုတာတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မတူနိုင်ဘူး.။ စစ်စည်းကမ်းနဲ့ တစ်သွေးတစ်သံ တစ်မိန့် ဆိုတဲ့ နေရာမှာ.... အတွေးအခေါ်မပါဘူး..။ ဒါကိုခွဲခြားတတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်...။
နောက်ပြီးခင်ဗျားတို့ ပိုက်ဆံတွေနဲ့ ကျနော်တို့တွေ ကျောင်းတက်နေရတယ်ဆိုတဲ့ အပြောမျိုးနဲ့ ဂုဏ်မဖေါ်ပါနဲ့.... ခင်ဗျားပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်ပေးရလဲ ကျနော်ပြန်အမ်းပေးလိုက်မယ်...။ ဒီလိုမျိုးအပြောတွေကို သဘောမကျတာပါ...။ ဥပမာ..ကျောင်းဆရာတွေ... စာသင်နေတယ်.. သူတို့ကို နိုင်ငံတော်ကလစာပေးတယ်.. သူတို့တွေလည်း ပြည်သူတွေရဲ့ ထမင်းကိုစားနေရတာပဲလေ.. ဒီလိုပဲအပြန်အလှန်ရှိတယ်.. သူတို့ ကြောင့် ပြည်သူတွေစာတတ်တယ်... ပြည်သူတွေကသူတို့တွေကို လစာပေးတယ်... ဒါပေမယ့်.. ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ အစိုးရမဆို... နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးဆိုတာ လုပ်ရပါတယ်....ခင်ဗျားတို့ ဆီက အခွန်ကောက်တယ်ဆိုတာ..... အစိုးရလခစားတွေ အကုန်လုံးအတွက် မလောက်ပါဘူး.... အခုလည်းကျနော်တို့ တွေ ကာကွယ်ရေးမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်.. ပြည်သူတွေကျနော်တို့ ကြောင့် အေးအေးဆေးဆေးနေရတယ်.. .ဒါအပြန်အလှန်ပဲ.... ကျနော်တို့ တွေ တစ်ခါတစ်ရံ အသက်ပေးလိုက်ကြရတယ်.. ဘယ်အရာကမှ.. အသက်တစ်ချောင်းထက် တန်ဖိုးမကြီးပါဘူး... တပ်ထဲဝင်မှ နိုင်ငံတော်ချစ်တယ်လို့ ကျနော်မပြောထားပါဘူး... အဲလိုလည်းမသတ်မှတ်ပါဘူး...။ ကျနော်ဦးတည်တာသည်..... မကောင်းတာလုပ်တဲ့ သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုတိတိကျကျဖေါ်ထုတ်ပါ.... ဒါဟာစောင့်စည်းတာမဟုတ်ပါဘူး... ကိုယ့်ရဲ့ မတိကျမှုကြောင့်... တခြားသူတွေပါ သို့ လောသို့ လောထင်စရာတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်..။ ဒီလိုမိုက်ရိုင်းတဲ့ ( ခင်ဗျားအမြင်အရ ) သူကိုမဖေါ်ထုတ်တော့ ကျန်တဲ့သူတွေပါ ဒီလိုလားဖြစ်နေတယ်.. နောက်ပြီးခင်ဗျားက စစ်ကျောင်းတွေပါ လှမ်းထိခိုက်ထားတယ်...။ ခင်ဗျားကပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုတော့ မထိခိုက်ပါဘူး.... တပ်မတော်တစ်ခုလုံးက အရာရှိတွေကိုမွေးထုတ်ပေးတဲ့ ကျောင်းတော်တွေ ကိုထိခိုက်တယ်....။ ကဲအဲတော့ခင်ဗျားရဲ့ ရေးသားမှုကို စဉ်းစားကြည့်...။ တပ်မတော်ဆိုတာရှိနေလို့ ကျနော်တို့ ရှိနေတယ်..ကျနော်တို့ ရှိနေလို့ တပ်မတော်ဆိုတာရှိတယ်.. ဒါဟာခွဲခြားလို့ မရဘူး..။ အပြန်အလှန်မှီတည်တယ်.. ခင်ဗျားကစကားလုံးကိုပြောင်းသုံးတယ်.. တပ်မတော်ကိုချစ်ပါတယ်.. လက်ရှိတပ်မတော်မဟုတ်ဘူး ဆိုပြီးရေးတယ်... အရင်က တပ်မတော်သားတွေလည်း.. တစ်ခါပဲ သေပေးခဲ့ကြတာပါ.. ကျနော်တို့ လည်း.. လိုအပ်ရင် တစ်ခါသေပေးရမှာပါပဲ... အသက်တွေချင်းအတူတူပါပဲ..။ ခင်ဗျားတို့ ကကြားထဲ ကနေသူများရဲ့ အသက်တွေကို တန်ဖိုးမဖြတ်ချင်ကြပါနဲ့....ခင်ဗျားတို့ ၀င်သေပေးရတာမဟုတ်ပါဘူး..။ အဲလိုပဲ..အပြန်အလှန်မှီတည်နေတဲ့ နိုင်ငံဝန်ထမ်းများနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ကြားထဲမှာမှ..ခင်ဗျားရဲ့ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်များပါနေသေးလဲပြောပါဦး..။ ကြားထဲက ဟုတ်သလိုလိုရှိတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ၀င်ပြီးဂုဏ်မဖေါ်ချင်ပါနဲ့...။ ဒီလို အပြန်အလှန်ဂုဏ်ဖေါ်နေတာတွေက. ...မတိုးတက်ပါဘူး..။
ခင်ဗျားဒီလိုမျိုးရေးလိုက်တဲ့ အတွက်... လူငယ်တွေချင်းကြားမှာ.. အမြင်စောင်းမယ်.. အုပ်စုကွဲမယ်.. အပြန်အလှန်ဂုဏ်ဖေါ်လာကြမယ် အနာဂါတ်အတွက်အကျိုးယုတ်တယ်.... မကောင်းတဲ့သူကို မဖေါ်ထုတ်တဲ့ အတွက်... ကောင်းတဲ့ သူတွေအချင်းချင်းပါ.. .စိတ်တွေငြိုငြင်လာကြမယ်... အခုတောင် ဒီတော့ပစ်အောက်ကို ၀င်ဖတ်မိပြီး.. အုပ်စုဘယ်လောက်ကွဲနေပြီလည်း မသိဘူး..။ အဲတော့ဒါမျိုးတွေ တိတိကျကျမရေးပဲ... လက်ရှိတပ်မတော်တစ်ခုလုံးကို ထိခိုက်အောင်ရေးခြင်းသည်......မကောင်းမှုကိုပဲဦးတည်လို့ မြင်သာအောင် လာရေးပေးတာပါ..။
အချက်အလက်တွေနဲ့ ပါတ်သပ်လို့ကတော့. ကိုကလိုစေးထူးပြောတာတွေဟာ တိကျတဲ့ အချက်အလက်တွေ အဖြစ်ကျနော်မမြင်မိပါဘူး..။ နောက်တစ်ခုက.. ကျနော်ဆွေးနွေးရေးသားရင်... တစ်ဘက်ကိုရိပြီး မရေးတတ်ပါဘူး... တည့် တည့် ဒဲ့ ပြောပြီးပဲရေးတတ်ပါတယ်..။
ဖိုရမ်မှာ ပြောခဲ့ဆိုခဲ့ကြတာတွေကတော့ အဲဒီလောက်ပါပဲ။ ဒီတော့ အဲဒီ ဆွေးနွေးချက်တွေကို အခြေခံပြီး ကျနော် ပြန်လည် ဆွေးနွေးပါမယ်။
အရင်ဆုံး ပြန်လည်ဆွေးနွေးမှာကတော့ အားလုံးဟာ နိုင်ငံကို ချစ်ကြတဲ့လူတွေချည်းပါပဲ ဆိုတဲ့ အချက်ပါ။ လုံးဝဥသုံ ယုံကြည်ပါတယ် ကိုမင်းမောင်။ ဒါပေမယ့် ချစ်နေကြတဲ့ ပုံစံခြင်း၊ အနှစ်သာရခြင်းကတော့ မတူကြပါဘူး။ ဘာကြောင့်ပါလဲ…။ အမြင်မတူကြလို့ပါ။ အယူအဆ မတူကြလို့ပါ။ အတွေးအခေါ် မတူကြလို့ပါ။ အဲဒီလို မတူကွဲပြားခြင်းဟာ စစ်သားဖြစ်ခြင်း၊ အရပ်သား ဖြစ်ခြင်းနဲ့ မဆိုင်ပါ။ ဒီတော့ အမြင်မတူကြတဲ့ အလျှောက် ချစ်ကြတဲ့ ပုံစံကွာပါတယ်။ ဒါဟာ ခွဲခြားပြောစရာ မလိုသလို သူ့အလိုလိုကိုက ကွဲပြားနေနှင့်ပြီးသားပါ။ တိုက်ခိုက်လိုစိတ် အလျဥ်းမရှိပါ။ ဒဲ့ပြောဆိုလို့ ပြောပါမယ်။ အနာပေါ် တုတ်ကျသွားတာ ဆိုရင်တော့လဲ မတတ်နိုင်ပါ။
ကိုမင်းမောင်ဟာ စစ်သားဖြစ်တဲ့အတွက် စစ်တပ်အထာကို သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ စစ်တပ်မှာ တပ်သားသစ်သင်တန်း ဖြစ်ဖြစ်၊ ဗိုလ်သင်တန်းဖြစ်ဖြစ် စစ်သင်တန်းတွေမှာ တပ်စုတခု၊ ဒါမှ မဟုတ် တပ်ခွဲတခုက သင်တန်းသား တယောက်ယောက်က အပြစ်ကျူးလွန်ရင် ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီ တပ်စု၊ တပ်ခွဲ တခုလုံးကို အပြစ်ပေးပါသလဲ..?။ အဖြေက အရှင်းလေးပါ။ တယောက်အပြစ်လုပ်တာဟာ အဲဒီတယောက်တည်းနဲ့ မပြီးပါဘူး။ သူပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ အစုအဖွဲ့ကိုပါ ထိခိုက်ပါတယ်။ အနည်းနဲ့ အများ ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ သူ့တယောက်အတွက်နဲ့ ကျန်တဲ့လူတွေကို မထိခိုက်စေချင်လို့ အားလုံးက ၀ိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းစေချင်တဲ့ တာဝန်ယူမှုကို သိအောင် အပြစ်ပေးပါတယ်။ `စစ်တပ်ထဲမှာ တယောက်မကောင်း အများပဲကွ´ လို့ စစ်သားတွေ ပြောလေ့ ရှိတာကိုရော ကျနော်က စမ်းတ၀ါးဝါးပြောနေတယ်လို့ မျက်စိ စုံမှိတ် ငြင်းချင်သေးရင်တော့လည့်း မတတ်နိုင်ပါ။
အဲဒီတော့ ထိုပုဂ္ဂိုလ်လေး ပြောတဲ့ စကားဟာ တပ်မတော်ကို အနည်းနဲ့ အများ ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ နောက်တခုက ကျနော်က `တပ်မတော်မှာ ရှိတဲ့လူတွေက ဒီလိုလူစားတွေလား´ လို့ သိမ်းကြုံးမပြောခဲ့ပါ။ စာအသွားအလာကို စေ့စေ့ငငဖတ်ပါ။ အဲဒီကောင်လေး ဒီစကားတွေ ပြောလာရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းကို ကျနော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိအနေအထားနဲ့ တည်မှီပြီးတော့ Analysis လုပ်၊ ရေးသားကြည့်တာပါ။ ဖတ်မိသူ တော်တော်များများကလည်း ကျနော် တပ်မတော်ကို ပုတ်ခတ်တယ်လို့ မမြင်ပါ။ အောက်က ကွန်မန့်တွေကို ကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီကောင်လေး Brain wash အလုပ်ခံရတယ်လို့သာ မြင်ကြတာကို တွေ့မှာပါ။ ကိုမင်းမောင် တဦးတည်းက တပ်မတော်ကို ကျနော်က ပုတ်ခတ်နေတယ်လို့ မြင်နေတာကတော့ စဉ်းစားစရာပါပဲ။
ကိုမင်းမောင် ဥပမာပေးသလို ကျနော်ကလည်း ဥပမာ ပြန်ပေးပါမယ်။ မိသားစု တခုထဲက ခပ်ဆိုးဆိုးကလေး တယောက်က အရပ်ထဲမှာ သောင်းကျန်း၊ အော်ဟစ် ဆဲဆိုနေပြီ ဆိုပါစို့။ ပထမ..၊ `ဒီကောင်လေး ရိုင်းလှပါလား´ လို့ လူတွေက သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒုတိယ `သူ့မိဘတွေက မဆုံးမဘူးလားမသိ´ လို့ ထပ်မံ သတ်မှတ်ပါမယ်။ ရိုးရိုးကလေးပါ။ `ငါ့သား ရိုင်းတာ ငါနဲ့ မဆိုင်ဘူး´ လို့ ပြောရင်တော့ ဒါဟာ တာဝန်မဲ့တဲ့ မိဘလို့ အရပ်က သတ်မှတ်ပါမယ်။
ကျနော်တို့ ပိုက်ဆံတွေကို ပြန်အမ်းချင်သပဆိုရင်တော့ ကိုမင်းမောင်ရေ..။ ကျနော့်တယောက်ထဲကို ပြန်အမ်းလို့ မရသလို ခင်ဗျားတယောက်ထဲက ပြန်အမ်းလို့လဲ မရပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ သန်းပေါင်းငါးဆယ်သော ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေရဲ့ ချွေးနှဲစာတွေကို မူးစု၊ ပဲစု စုပြီး ပေးထားရလို့ ပြန်အမ်းပေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ အဲဒီစကားကတော့ ကလေးဆန်လွန်းပါတယ်။ ဂုဏ်ဖော်ပြောတာ မဟုတ်ပါ။ သိအောင် ထောက်ပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူတွေ ကျနော်တို့ကြောင့် အေးအေးဆေးဆေး နေနေရတယ်ဆိုတဲ့ စကားကိုတွေ့တော့ မပြုံးဘဲ ၀ါးလုံးကွဲသာ ရယ်လိုက်ချင်ပါရဲ့ ကိုမင်းမောင်ရေ။ ဒါကတော့ ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်း၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို လုံးဝ အထင်ကြီးမှုကြီးလို့ မြင်ပါတယ်။ ပြောရက်ပါပေ့။။ ပြောထွက်ပါပေ့။
တပ်မတော်ကို ချစ်ပါတယ် (လက်ရှိတပ်မတော်ကိုတော့ မဟုတ်ပါ) ဆိုတာဟာ စကားလုံး ပြောင်းသုံးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗြောင်ပြောတာပါ။ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးရဖို့ အသက်သွေးချွေးတွေ ကို ကိုယ်ကျိုးမငဲ့ဘဲ ပြည်သူကို အကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ ဟိုတုန်းက တပ်မတော်နဲ့ လက်ရှိတပ်မတော်က လားလားမှ မဆိုင်၊ မတူ လို့ လက်ရှိတပ်မတော်ကိုတော့ မချစ်ရုံမက စက်ဆုပ်ပါတယ်။
အသက်တွေခြင်း တူတာ မှန်ပေမယ့် သေရခြင်းကတော့ မတူပါဘူး။ ဒါကိုလဲ ပြောပြီးပါပြီ။ ထပ်ပြောလိုက်ပါမယ်။ အမေရိကန်က ဗာဂျီးနီးယား တက္ကသိုလ်မှာ မကြာသေးခင်ကမှ ဖြစ်သွားတဲ့ ကိုရီးယားကျောင်းသားလေးက လူ ၃၂ ယောက်ကို သတ်ပြီး သူ့ကိုယ်သူပါ အဆုံးစီရင်သွားတာဟာ မြင့်မြတ်သော သေခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ အဓိပ္ပာယ်လဲ မရှိပါဘူး။ သေခြင်းမှာလည်း အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ ကျနော်ခွဲခြားပြောလို့ ကွဲပြားနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့အလိုလိုကိုက အဓိပ္ပာယ် ကိုယ်စီ ရှိနှင့်နေတာပါ။ အဲဒီတော့ တချိန်က တပ်မတော်သားတွေရဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် အသက်ပေးပုံနဲ့ လက်ရှိတပ်မတော်သားတွေရဲ့ အသက်ပေးပုံ လားလားမှ မတူပါ။
ကျနော်ရေးလိုက်တိုင်း အမြင်တွေ စောင်းကုန်လိမ့်မယ်ဆိုတာကတော့ တခြားသော စာဖတ်သူတွေကို ကိုမင်းမောင်ရဲ့ အထင်သေးခြင်း တမျိုးပါပဲ။ လူတွေဟာ သူ့အသက်အရွယ်၊ သူ့ရပ်တည်ချက်နဲ့သူ ခွဲခြားပိုင်းဖြတ်နိုင်တဲ့ အသိဉာဏ် ကိုယ်စီရှိကြတဲ့ အတွက် ကျနော်ရေးတာက မှားနေသလား ကိုမင်းမောင်တို့ တပ်မတော်ကြီးက ကောင်းနေလားဆိုတာ သူတို့ ကိုယ်ပိုင်အသိနဲ့ ဆုံးဖြတ်ယူပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်က ကျနော့်အမြင်ကိုရေးပါတယ်။ ဒီလောက်ပါပဲ..။
အပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိသော ဆွေးနွေးချက်များကို ရင်ဖွင့်ကြိုဆိုလျက်..။
Posted by ကလိုစေးထူး at 9:10 PM 15 comments
၁၉၈၈ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်း ကာလများဆီက ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ့အသံ ရေဒီယိုနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားတွေမှာ မနက်ဆိုလည်း စစ်ချီတေး၊ စစ်သည်တေး နေ့လည်ဆိုလည်း စစ်ချီတေး၊ စစ်သည်တေး၊ ညနေဆိုလည်း စစ်ချီတေး၊ စစ်သည်တေးနဲ့ တနိုင်ငံလုံးမှာ စစ်သားတွေရဲ့ သံပြိုင်ဟစ်ကြွေး သီဆိုသံတွေက ဟိန်းဟိန်းညံနေခဲ့ပါတယ်။
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ကြိမ်ဖန်များစွာ ကြားနေရတဲ့ ဒီအသံတွေကို လူကြီးတွေကတော့ `ဒါဟာ စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး လုပ်နေပါလား´ လို့ သဘောပိုက်ခဲ့ပေမယ့် ဘာမှန်းမသိတဲ့ အဲဒီတုန်းက လေးငါးခြောက်နှစ် အရွယ် ကလေးသူငယ်တွေကတော့ အဲဒီအချိန်က ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ စစ်ချီသီချင်းတွေကို လိုက်ဆိုခဲ့ကြတာကို မှတ်မိနေပါသေးတယ်။
`ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို မကောင်းပြောတဲ့လူတွေ ရှိနေတယ် အကို´
`ဟုတ်တယ် အကို၊ အောင်ဆန်းလို့တောင် ခေါ်တာ´
`သြော်၊ ခေါ်တဲ့လူက အသက်ဘယ်လောက် ရှိပြီလဲ´
`သူက ပြောသေးတယ်၊ အောင်ဆန်းခေါ်ခဲ့တဲ့ ဂျပန်တွေက မြန်မာပြည်က သယံဇာတတွေကို အများကြီးယူသွားတာတဲ့။ အမှန်ဆို လွတ်လပ်ရေးက ရတာက ရမှာပဲတဲ့၊ နို့မို့ဆို အခုလောက်ဆိုရင် ဟောင်ကောင်လို ဖြစ်နေလောက်ပြီတဲ့။ အောင်ဆန်းကြောင့် တိုင်းပြည်က အခုအချိန်မှာ ဒီလိုဖြစ်နေရတာတဲ့´
အထက်ပါ စကားတွေကို ကြားရတဲ့ အခိုက်အတန့်မှာ ကျနော့်စိတ်တွေ ဆူပွက်သွားပါတယ်။ ခံပြင်းမှု၊ ဒေါမနဿဖြစ်မှုနဲ့ အတူ ၀မ်းနည်းခြင်းတွေကိုပါ တချိန်တည်းမှာ ခံစားလိုက်ရပါတယ်။
တဆက်တည်းမှာ သိလိုက်ရတာက အဲဒီ စကားကို ပြောသူဟာ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကနေ ပြိုကွဲသွားတဲ့ ဥရောပ နိုင်ငံတခုမှာ စစ်ပညာလာသင်နေတဲ့ ကောင်လေးပါလားဆိုတာ သိခွင့်ရလိုက်ပါတယ်။
အတန်ငယ် သွေးအေးသွားတဲ့ အချိန်မှာတော့ အနှီ အသက်(၂၄)နှစ် အရွယ် ပုဂ္ဂိုလ်လေး ဘယ်လိုအကြောင်းတွေကြောင့် ဒီလိုအတွေးတွေ ၀င်နေရပါသလဲ ဆိုတာကို ဆန်းစစ်ကြည့်မိပါတယ်။
အသက်(၂၄)နှစ် ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ယခု လက်ရှိ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကနေ ရေတွက်ရင် ထိုပုဂ္ဂိုလ်လေးဟာ ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှာ လူ့လောကကို စတင်ရောက်ရှိပါမယ်။ ဒီတော့ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ သူ့အသက်ဟာ (၅)နှစ်သားပေါ့။ အဲဒီ ကလေးငယ် အသက်(၅)နှစ်ပြည့်မြောက်လို့ သူငယ်တန်း စတင်သင်ကြားတဲ့ အချိန်မှာတော့ မြန်မာပြည်မှာ အထက်က ပြောခဲ့သလို စစ်ချီသီချင်းသံတွေ လှိုင်လှိုင်ကြီးကို ညံနေပါပြီ။
သူ လူမှန်းသိတတ်စ အရွယ်မှာ အာဇာနည်နေ့မှာ မြန်မာ့အသံကနေ ဗိုလ်ချုပ်မိန့်ခွန်း မလွှင့်တော့ပါဘူး။ `မှတ်မိသေးတော့သလေ~~ သတ္တိသွေးတွေ မွေးထုတ်ခဲ့ပေ~~~ ဒို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလေ´ ဆိုတဲ့ ဒေါ်ခင်ညွှန့်ရီရဲ့ သီချင်းအစား `သူမပါရင်လေ~~~ ဘယ်လိုများ ရှေ့ဆက်ဖြစ်ကြမယ်~~~ သူမပါချင်လည်း တကယ်ကိုပဲ သားဆိုးများကြောင့်´ ဆိုတဲ့ ချစ်ကောင်းရဲ့ `အဖေနဲ့ သားများ´ သီချင်းကသာလျှင် ထပ်ခါတလဲလဲ ကြားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီကောင်လေး တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အရွယ်ရောက်လာတဲ့ အချိန်မှာလည်း သူနေတဲ့ စာသင်ကျောင်းရဲ့ ရုံးခန်းထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ရုပ်ပုံ မရှိတော့ပါဘူး။ လက်ရှိ အကြီးအကဲဆိုသူရဲ့ ဘေးတိုက်တမျိုး၊ တည့်တည့် တဖုံ အိုက်တင်တခွဲသားနဲ့ ပုံကိုသာ သူမြင်ရပါလိ့မ်မယ်။
လက်ရှိသုံးစွဲနေတဲ့ ငွေစက္ကူသည်လည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ သူ ပိုက်ဆံ စတင်သုံးရမယ့် အရွယ်၊ တနည်းအားဖြင့် လူလားမြောက်တဲ့ အရွယ်မှာ သုံးစွဲနေတဲ့ ငွေစက္ကူတွေက ဗိုလ်ချုပ်ပုံအစား ဘာကောင်မှန်းမသိတဲ့ အကောင်တကောင်ပုံနဲ့ ငွေစက္ကူကိုသာ သူသုံးစွဲရပါလိမ့်မယ်။
တကယ်တော့ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ဗိသုကာကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို သူ့ခေတ်သူ့အခါ ကတည်းက လူတိုင်းက ချစ်နေကြတာတော့ ဟုတ်မယ် မထင်ပါဘူး။ မုန်းတဲ့လူတွေလဲ ရှိခဲ့ကြမှာ ဧကန်မလွဲပါဘဲ။ မုန်းတဲ့လူတွေ ရှိခဲ့ကြလို့သာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ တကွ အဖိုးတန်လှတဲ့ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ လုပ်ကြံခံခဲ့ရတာပါ။
ဗိုလ်ချုပ်ကို မလုပ်ကြံခဲ့ပေမယ့် မနာလို တိုရှည် ဖြစ်နေကြသူတွေကလည်း ထိုစဉ်အခါကတည်းက ရှိခဲ့မှာ အသေအချာပါ။ အဲဒီ မနာလို တိုရှည်ဖြစ်နေကြသူတွေထဲက တယောက်ဖြစ်တဲ့ ဦးနေ၀င်းဟာ မြန်မာပြည်ကို ၂၆ နှစ်တိုင်တိုင် ဗိုလ်ကျစိုးမိုးခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။
ဦးနေ၀င်း တခေတ်ကုန်ဆုံးလို့ နောက်တော်ပါး သူ့တပည့်တွေရဲ့ လက်ထက်မှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပေါ် သူတို့ရဲ့ မနာလိုဖြစ်မှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်းငှာ မစွမ်းသာတော့ပါဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ပတ်သက်တာ မှန်သမျှ အားလုံး မှေးမှိန်အောင်၊ နောက်ဆုံးမှာ သမိုင်းကနေ ဖယ်ထုတ်ပစ်ဖို့ပါ တစတစနဲ့ အတင့်ရဲစွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံတခုမှာ လက်ရှိ အာဏာရသူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ၀ါဒကို လူတွေ လက်ခံလာအောင် နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကြိုးစား ရိုက်သွင်းပါတယ်။ နိုင်ငံပိုင် စာနယ်ဇင်း၊ ရုပ်သံ၊ ရေဒီယို အစရှိတဲ့ မီဒီယာတွေကို အသုံးချပြီး ၀ါဒဖြန့်ခြင်းများအပြင် နောက်ထပ် သူတို့ လုပ်လေ့ရှိတာကတော့ မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များကို သူတို့ရဲ့ ၀ါဒကို သက်ဝင်ယုံကြည်လာအောင် ရိုက်သွင်းခြင်းပါပဲ။
အထက်ပါ ၂၄ နှစ်အရွယ် လုလင်လေးဟာ သူ့အသက် ၁၆နှစ်၊ သို့မဟုတ် ၁၇ နှစ်မှာ ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းကို တက်ရောက်ခွင့် ရတယ်ဆိုပါစို့။ အဲဒီအချိန်ဟာ ၁၉၉၉ခုနှစ်၊ ဒါမှမဟုတ် ခရစ်နှစ် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာပါ။ အဲဒီအချိန်ကာလမှာတော့ မြန်မာပြည်မှာ စစ်အာဏာရှင် စနစ်က အတော်ကြီးကို အားကောင်းနေပါပြီ။
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာ ကျနော် အဝေးသင် တတိယနှစ် ဖြေရတော့ စစ်တပ်ထဲကနေ အဝေးသင်လာဖြေတဲ့ တယောက်နဲ့ အသိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက သူပြောပြခဲ့ဖူးတာ တခုရှိပါတယ်။
`ငါတို့ စစ်တပ်ထဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဒေါ်စုလို့ မခေါ်ရ၊ စုကြည်၊ ဘိုကတော် လို့ပဲ ခေါ်ရမယ်လို့ တပ်ရင်းအစည်းအဝေးမှာ တခါပြောဖူးတယ်´
အတိုက်အခံ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အဲဒီလို သဘောထားခဲ့တဲ့ အုပ်ချုပ်သူ ပုဂ္ဂိုလ်များဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အဖေ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုတော့ ကြည်ညိုလေးစားကြဖို့ဆိုတာ ရာခိုင်နှုန်း အင်မတန်နည်းလှပါတယ်။
ဒီတော့ အဲဒီကောင်လေး တက်ခဲ့ရတဲ့ ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းကာလတွေမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်းကို သူ့သင်တန်းဆရာတွေက ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ သင်ကြားပို့ချခဲ့မလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါပဲ။
တကယ်ဆိုရင်တော့ ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းလို နေရာမျိုးမှာ အမြှောက်စားခံရမယ့် လူတွေဟာ အမိန့်အနာခံဆုံး၊ အသားအသေဆုံး၊ တနည်းအားဖြင့် လက်ရှိအုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့ သြ၀ါဒကို တသွေမတိမ်း လိုက်နာဖို့ အလားအလာ အကောင်းဆုံး လူမျိုးကိုသာ မြှောက်စားမှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါ။ အဲဒီလို မြှောက်စားခံရတဲ့ ဗိုလ်လောင်းတယောက်က သင်တန်းဆင်းလို့ ဗိုလ်ဖြစ်လာတော့လည်း နှစ်နဲ့ချီပြီး ရိုက်သွင်းပေးလိုက်တဲ့ ၀ါဒတွေက အမြစ်တွယ်သွားပါပြီ။
နိုင်ငံခြားကို ပညာတော်သင် စေလွှတ်ခြင်းဆိုတာဟာလည်း မြှောက်စားခံရခြင်း တမျိုးပါပဲ။ ဒီကြားထဲကမှ စစ်ပညာတော်သင် သင်ကြားခွင့်ရသူဆိုရင်တော့ မြန်မာပြည်ကနေ တရားဝင်ဗီဇာနဲ့လာတာကလည်းဖြစ်၊ လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့ လူတန်းစားထဲကလည်းဖြစ်ဆိုတော့ သာမန်အားဖြင့် ကြည့်လိုက်ရင်တော့ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်မတိမ်းမယိမ်း လူငယ်တယောက်အဖို့ ယစ်မူးချင်စရာ၊ ခေတ်စကားနဲ့ဆိုရင်တော့ ခပ်မြောက်မြောက် ဖြစ်ချင်စရာတွေပါ။
ဒါပေမယ့် သတိပြုမိစရာ တခုကတော့ အထက်က တင်ပြခဲ့တဲ့ သူတို့လေးတွေရဲ့ နှုတ်ထွက်စကား တချို့ပါ။ ဒါတွေဟာ သူတို့ကို မွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ သင်ခန်းစာတွေက ပေးတဲ့ အသိလေလား၊ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ အထက်လူကြီးတွေရဲ့ ဆိုဆုံးမစကားတွေထဲက ပေါ်ထွက်လာတဲ့ ထင်ဟပ်မှုလေလားဆိုတာပါ။
ပြည်ပမှာ ပညာတော်သင်ခွင့် ရပြီးလို့ ရွှေပြည်ကြီးကို ပြန်ရောက်သွားတဲ့ အချိန်မှာ သူတို့တွေရဲ့ ရာထူးတွေက အငြိမ်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တဆင့်တဆင့်နဲ့ တိုးတက်လာအုံးမှာပါ။ ဒီလို (အောင်ဆန်းလုပ်လို့ ငါတို့နိုင်ငံ ဒီလိုဖြစ်နေတာဆိုတဲ့) အရိုးစွဲမှုရှိနေတဲ့ လူငယ်လေးတယောက်က တချိန်ချိန်မှာ (မတော်တဆ)နဲ့ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် ဖြစ်သွားခဲ့ရင် ….???။
အားလုံး ကြည့်ပြီး သိပြီး ဖြစ်ကြမှာပါ။ လက်ရှိ အကြီးအကဲ ဆိုသူရဲ့ သမီးဟာ သူ့ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ကို ဆင်းရဲ မွဲတေနေတဲ့ တိုင်းပြည်သူ ပြည်သားတွေဆီက မတရား ခိုးယူသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ ငွေတွေနဲ့ ခမ်းနားကြီးကျယ်စွာ မျက်နှာပြောင်တိုက် ဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကလည်း နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ပညာတော်တွေသင်၊ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် အကွက်ချလို့ မင်းဆက်တခု အသစ်ထပ်ဖော်တော့မလားတောင် ထင်မှတ်မှားနေရပါပြီ။
အဲဒီလို အခွင့်အရေးသမားတွေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သမိုင်းကြောင်းက မယှဉ်သာအောင် နံသာဆီနဲ့ အီးပမာ ကွာခြားလွန်းလှပါတယ်။ မစွန့်ဘဲ စားနေကြတဲ့ လူတွေက မစားဘဲ စွန့်သွားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ သမိုင်းကို ဖျောက်ဖျက်ပစ်ရုံသာမက အခုတော့ ရိုင်းပျတဲ့ အဆင့်ကိုပါ ရောက်ရှိနေပါပြီ။
အထက်တန်း ကျောင်းသား ဘ၀က သင်ခဲ့ရတဲ့ `ပတ္တမြား ရွှေဂူ´ ကဗျာလေးကို အမှတ်ရမိပါတယ်။ တကယ်တော့ ပတ္တမြားရဲ့ တောက်ပြောင်ထွန်းလင်းမှုကို မရှုစိမ့်ဘဲ ညွှန်သွားလူးကြရင် မိမိကိုယ်ကို ဘယ်လို အနေအထားကို ရောက်နေတယ်ဆိုတာကို ပြသနေပြီလဲ ဆိုတာ သတိချပ်သင့်ပါတယ်။ ။ ဘယ်လိုပင် မှေးမှိန်အောင် လုပ်ပေမယ့် ပတ္တမြားရွှေဂူကတော့ အရောင်မှိန်မှာ မဟုတ်ပါ။
ထိုပုဂ္ဂိုလ်လေး ရောက်ရှိ ပညာသင်ကြားနေကြတဲ့ နိုင်ငံမှာ တခြားတခြားသော နိုင်ငံမှ စစ်ပညာတော်သင် ရောက်ရှိနေကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း ရှိကြမှာပါ။ အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ်လေးရဲ့ အတွေး၊ အပြော၊ ခံယူချက်တွေကို တခြားနိုင်ငံက လူတွေက ဘယ်လို သုံးသပ်မလဲ။ မိမိနိုင်ငံ ကိုလိုနီဘ၀က လွတ်မြောက်အောင် အသက်ကိုတောင် ပဓာနမထားဘဲ ချမ်းသာခြင်း စည်းစိမ်ဆိုတာ တစိုးတစိမှ စံစားသွားခြင်း မရှိရှာတဲ့ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကိုတောင် စော်ကားဝံ့သူတွေဟာ ငါတို့နဲ့ အတူတူ ပညာသင်နေကြပါလားလို့ မှတ်ယူသွားကြရင်ဖြင့်…..။
သူ့ဆန်စားလို့ ရဲရသည့်တိုင်အောင် မိမိ၏ တကယ့်ကျေးဇူးရှင် အစစ်ကိုတော့ မစော်ကားစေလို၊ မရိုင်းပျစေလိုပါ။ စာသင်ခြင်း သို့တည်းမဟုတ် ပညာဆည်းပူးခြင်းဆိုတာဟာ အသိဉာဏ်ကို ရင့်သန်စေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကျိုးရှိစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို အတွေးအခေါ်နဲ့ မှိုင်းမိနေတဲ့ ဒီလို ၀ါဒတွေကတော့ အပြစ်ဖြစ်စေဖို့ကိုသာ ဦးတည်နေပါပြီ။
ဗိုလ်ချုပ်ကို စော်ကားရိုင်းပျသူများကို ဗိုလ်ချုပ်ပြောသွားတဲ့ မိန့်ခွန်းတခု လက်ဆောင်ပါးလိုက်ချင်ပါတယ်။
`ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုး ရှိနေသမျှ ကာလပတ်လုံး၊ ဒီတိုင်းပြည် ဘယ်တော့မှ ပြန်လည် မထူထောင်နိုင်ဘူး´
အမြင်မှား၊ အတွေးမှားသူတို့၏ ၀ါဒဖြန့် လှိုင်းတံပိုးအောက်မှ မျိုးဆက်သစ်များ လွတ်မြောက်ကြစေရန် ရည်သန်လျက်…။
(မနေ့က တင်ခဲ့တဲ့ ပို့စ်ရဲ့ နိဂုံးကို အနည်းငယ် ပြန်လည် ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်ထားပါတယ်)
Posted by ကလိုစေးထူး at 10:38 PM4comments
လွယ်အိတ်ကို စလွယ်သိုင်းလွယ်၊ ကျောင်းဝတ်စုံ ဖြူစိမ်းကို သေသပ်စွာဝတ်ပြီး ကျောင်းသွားရန် အိမ်မှထွက်သော အချိန်တွင် မနက် ၈ နာရီ ကျော်ကျော်သာ ရှိပါသေးသည်။ အိမ်ကလေး ရှိရာမှ မြို့၏ တခုတည်းသော ကတ္တရာလမ်းဖြစ်သော `ဗိုလ်ချုပ်လမ်း´ ကို ရောက်တော့ ကျောင်းသွားသူ တယောက်စ နှစ်ယောက်စကို စတင်မြင်နေရပြီ။
မိနစ်အနည်းငယ် လျှောက်သွားအပြီးတွင်တော့ ပညာရည်နို့ သောက်စို့ရာ ကျောင်းတော်မဟာဆီသို့ ရောက်၏။ မြို့၏ တကျောင်းတည်းသော အထက်တန်းကျောင်း။
ကျောင်းတော်သည်ကား ဟိတ်ဟန်ကင်း၏။ မာန်မာနမဲ့၏။ လာသမျှသော ကျောင်းတော်သူ၊ ကျောင်းတော်သား အားလုံးကို ရင်မှဖြစ်သော သားသမီးများနှယ် ပြုံးရွှင်ခြင်း တပွေ့တပိုက်ဖြင့် ကြိုဆို၏။
အင်္ဂလိပ် အက္ခရာ `E´ ပုံသဏ္ဍာန်ဆောက်လုပ်ထားသော ကျောင်းကို ပုံဖော်ပါရစေအုံး။ ခြံစည်းရိုးတလျှောက် ဒေသအခေါ် `ဘိုကတော် မျက်ခုံး´ ပင်များဖြင့် အလှဆင်ဝင်းခတ်ထားသော ကျောင်းထဲ၌ ပိန္နဲ၊ မာလကာ၊ သီဟိုဠ်၊ သရက်ပင်တို့က ဟိုနားတပင် ဒီနားတပင်ဖြင့် အေးမြခြင်း အသွင်ကို ဆောင်ကြသည်။
ကျောင်း၏ အနောက်ဘက်တွင်တော့ မျှော်မဆုံးသည့် လယ်ကွင်းပြင်က နှစ်အစတွင် စိမ်း၊ နှစ်အဆုံးတွင် ၀ါ အရောင်နှစ်ဖြာဖြင့် အလှဂုဏ်မောက်၏။ လယ်ကွင်းပြင်၏ တဆုံး ဟိုမှာဘက်တွင်တော့ မှိုင်းပြပြတောင်တန်း ခပ်ညို့ညို့က မာနတခွဲသားဖြင့် ခန့်ထည်ခြင်း အသွင်ကို ဆောင်နေလေ၏။
ကျောင်းကိုလာကြသူ ကျောင်းတော်သူ၊ ကျောင်းတော်သားများမှာ အသွင်စုံလှပါဘိ။ ငွေကြေးတတ်နိုင်သူ တယောက်စ နှစ်ယောက်စမှာ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ကျောင်းလာ၏။ တချို့မှာကား စက်ဘီးဖြင့် ခရီးနှင်၏။ အများစုသည်ကား ခြေကျင်။ မြို့မှ လေးငါးမိုင်အကွာ တောနယ်မှ ပညာရှာလာသူများမှာတော့ ကျောင်းကို မလာမီ မနက်ခင်းဈေးမှာ ဈေးရောင်းနေရသေး၍ထင့်၊ သူတို့၏ ဟန်ပန်က ပန်းလျနေသယောင်ယောင်၊ ပန်းသော်ငြား အပြုံးပန်းတွေကတော့ လန်းလျက်သာ။
ကျောင်း၏ စာသင်ခန်းများမှာလည်း မြို့ပြများနှင့် မတူပြန်။ ပဉ္စမတန်း၊ ဆဋ္ဌမတန်း၊ သတ္တမတန်း၊ အဋ္ဌမတန်းများမှာ တခန်းစီသာ ရှိ၏။ မြို့ပြများလို အေ၊ ဘီ၊ စီ၊ ဒီ မရှိ။ ရှိလောက်အောင်လဲ ကျောင်းသားဦးရေ မများချေ။ န၀မတန်းနှင့် ဒသမတန်းများကိုတော့ ၀ိဇ္ဇာခန်း နှင့် သိပ္ပံခန်းဟူ၍ နှစ်ခန်းစီ ခွဲထားသည်။
ဆရာ/ ဆရာမ အများစုမှာလည်း နယ်မြေခံများသာ..။ လက်နက်ကြီး/ငယ်သံတွေ ရံဖန်ရံခါ ကြားရတတ်သော၊ မငြိမ်းချမ်းသော ဒီမြို့ကလေးမှာ မြို့ကြီးပြကြီးမှ ဆရာ/ဆရာမများမှာ ရေရှည် မနေနိုင်။ အများဆုံး နှစ်နှစ်ခန့်သာ နေ၍ ရာထူးတိုးသောအခါ ပြောင်းရွှေ့ကုန်၏။ သို့နှင့် နယ်မြေခံ ဆရာ/ဆရာမများသည်သာ ဒီကျောင်းနှင့် တသားတည်းကျနေတော့၏။
ကျောင်း၏ ဆယ်တန်း အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်းမှာ သိပ်မကောင်းလှ။ (က)စာရင်းနှင့် (ခ)စာရင်း ခြစ်ခြစ်မည်အောင် နှစ်ခုပေါင်းမှ ၂၅%အောင်သည့် နှစ်က အောင်ချက် အကောင်းဆုံး။ ကျူရှင် မရှိ၊ ဘော်ဒါဆောင် နတ္ထိ..။ ဒီလောက် တောကျသည့် မြို့မှာ ကျူရှင်သင်စားရင်လည်း အလုပ်ဖြစ်မည်မထင်။
သို့သော် ဒီမြို့ကလေးမှ ဆရာဝန်ထွက်ပေါ်ဖူးသည်။ အင်ဂျင်နီယာ ထွက်ပေါ်ဖူးသည်။ ယင်းသို့နှယ် တချို့သော ပန်းများ ဖူးပွင့်ဝေဆာသွားသကဲ့သို့ တချို့မှာကား လန်းတင့်ဆန်းဆင့်ခွင့် မရရှာသည့် ဖူးငုံစ ပန်းကလေးများနှယ် ဆုံးခန်းတိုင်အောင် ပညာမသင်နိုင်ကြဘဲ ကျောင်းတော်ကြီးကို ခွဲခွာသွားကြသူများမှာလည်း ဒုနှင့်ဒေး။
စာသင်နှစ် တနှစ်၏ ကုန်ဆုံးချိန်တွင်တော့ မြို့ပြကျောင်းများတွင် မရှိသော ဓလေ့တခုက ဆရာစစ် အတန်းများ စာမေးပွဲပြီးဆုံးသည်နှင့် ဆယ်တန်းဖြေဆိုခါနီး ကျောင်းသူ/ ကျောင်းသားများကို ကျောင်းတွင် စခန်းသွင်း၍ ကျောင်းဆရာ/ ဆရာမများ၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် စာကျက်စေခြင်း အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းအပေါ်ထပ်တွင် မိန်းကလေးများ၊ အောက်ထပ်တွင် ယောက်ျားလေးများကို နေစေ၍ ဆရာ/ဆရာမများက မိမိရင်မှ ဖြစ်သော သားသမီးရင်းချာများနှင့်မခြား စေတနာထား၍ သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အချိန်များ အကုန်ဆုံးခံကာ စေတနာထား သင်ကြားပေးကြသည်။
ကျောင်းတက် သံချောင်းခေါက်သံက ကျောင်းဝင်းတ၀ိုက် ပြန့်ကျဲနေသော ပန်းကလေးများကို စုစည်းရန် အလို့ငှာ တဒေါင်ဒေါင်နှင့် မြည်ဟီးလေ၏။ မိနစ်အနည်းငယ် အကြာတွင်တော့ စာသင်ခန်း ကိုယ်စီမှ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူတို့၏ စာအံသံများက အနာဂတ်၏ တေးသွားများသဖွယ် ဟိုတစ ဒီတစဖြင့် လွင်လွင်သာလေတော့သည်။
မုန့်စားဆင်းချိန်ဖြစ်သည့် နေ့လည် ဆယ့်နှစ်နာရီမှ တနာရီအကြား ကာလသည်ကား အဆော့သန်သော ကျောင်းသားများအတွက် မဟာ အချိန်ကောင်းပေတည်း။ တချို့က နှစ်ဖက်ခွဲ၍ ဘောလုံးကန်ကြသည်။ တချို့က တန်းခုန်ကြသည်။ တချို့ကျောင်းသူများက ဖန်ခုန်၊ ထုပ်ဆီးထိုး။ လူပျိုပေါက်၊ အပျိုပေါက် ကျောင်းသားကြီး ကျောင်းသူကြီးများမှာတော့ အငယ်များဆော့ကစားနေကြသည်ကို ကျောင်းဝရန်တာမှ ငေးသူကငေး၊ စာသင်ခန်းထဲမှာပင် တကုပ်ကုပ်နှင့် စာကျက်သူကကျက်။ အရပ်ထဲမှာ ပေါ်သမျှ သီချင်းအစုံစုံကို ကျောင်းခန်း အဆိုတော်လုပ်ပြီး စာသင်ခုံကို တဒေါက်ဒေါက်ခေါက်၍ ဆိုညည်းသူ ကျောင်းသားများကလည်း မနည်း။
နေ့ခင်း ကျောင်းပြန်တက်ချိန်တွင်တော့ ကလေးများ၏ စာအံသံများ စီစီညံပြန်လေပြီ။ ကျောင်းသားကြီးတချို့မှာတော့ ပျင်းရိဖွယ် ဘာသာရပ်နှင့် အပုပ်ချိန်နေ့ခင်း၏ လွန်ဆွဲမှုအကြားတွင် ကမ္ဘာ့အလေးလံဆုံးသော မျက်ခွံကို မနည်းအားတင်းဖွင့်ရင်း ဆရာ၏ သင်ကြားမှုကို ကြားတချက်၊ မကြားတချက်။ ပါးနပ်ပြီး ဟာသဉာဏ်ရွှင်သော ဆရာတချို့က ငိုက်မြည်းတတ်သော ယင်းအချိန်တွင် ရယ်ရွှင်ဖွယ်များနှော၍ သင်ခန်းစာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် သင်ကြားလေသည်။ သို့နှင့်ပင် ကျောင်းသားများမှာ ငိုက်မြည်းလိုက်၊ ရယ်မောလိုက်၊ ဖတ်မှတ်လိုက်နှင့် နေ့လည် စာသင်ချိန်ကို ဖြတ်သန်းကြ၏။
မွန်းလွဲ သုံးနာရီ …။
ကျောင်းဆင်း သံချောင်းခေါက်သံ အက်ကွဲကွဲက တဒေါင်ဒေါင်မြည်အပြီးတွင်တော့ စုဘူးထဲမှ ငွေအကြွေများ ကြဲဖြန့်လိုက်သည့်နှယ် ကျောင်းတော်၏ သားသမီးငယ်များ ကျောင်းရှေ့ကွင်းပြင်သို့ ဖွေးကနဲ ဖြာထွက်လာကြသည်။
ဆိုင်ကယ်သံက တဝေါဝေါ၊ စက်ဘီးသံ တဖျောဖျော အကြားမှာ ကျောင်းတော်သူ ကျောင်းတော်သားတို့၏ ရယ်ရွှင်သံ တသောသောဖြင့် ညနေခင်းက လှပနေ၏။ မြို့ပေါ်နေ ကျောင်းသားများအတွက်တော့ ကျောင်းနှင့်အိမ်က မဝေးလှသော်ငြား တောနယ်နေ ကျောင်းသားများအတွက်တော့ မထောင်းတာလှ။ သုံးမိုင်မှသည် ခုနှစ်မိုင်အထိ ဝေးသော အရပ်မှ ကျောင်းလာတက်ရသူများမို့ တောကိုကျော်၊ ချောင်းကိုဖြတ်နှင့် အိမ်အပြန်လမ်းကို မြန်းရသည်။ သို့သော် နွမ်းတယ်တော့ သူတို့ မထင်၊ ယင်းသို့ပင် သွားလိုက် ပြန်လိုက်နှင့် နေ့စဉ်ကျောင်းတက်မြဲ ပညာရှာမြဲ။
အတိတ်အဖြူရောင် ကာလ၏ ဆယ့်ခြောက်နှစ် အကြာမှာတော့ ကျောင်းကလေးနှင့် ကမ္ဘာတဖက်စီ ခြားခဲ့လေပြီ။ မငြိမ်းမချမ်းနှင့် မြို့ကလေးဆီက ကျောင်းကလေးမှာ ဘယ်လိုနေရှာမှာပါလိမ့်။ ဆွေးစိတ်နဲ့ မျှော်မှန်းပေမယ့် ထိုစဉ်အချိန် ဖြူစင်သော ဘ၀ကိုတော့ ပြန်မရနိုင်တော့လေပြီ။ အတ္တများ၊ မောဟများနှင့် အားပြိုင် ရုန်းကန်ရင်း ၀င်ကစွပ်ကောင် ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်နေလေတော့..။
(အထက်တန်းကျောင်းသား ဘ၀.. အမှတ်တရ)
Posted by ကလိုစေးထူး at 10:16 PM2comments
ဒီတခါ ကျနော့်အကြိုက် အဖြစ် တင်ပြမယ့် ၀တ္ထုတိုလေးကတော့ ၂၀၀၇ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလထုတ် မဟေသီမဂ္ဂဇင်းမှာ ပါရှိတဲ့ ဆရာလေးစိုး(ဒေးဒရဲ) ရဲ့ `သူတော်ကောင်း အတ္ထုပ္ပတ္တိ´ ဆိုတဲ့ အတိုဆုံး ၀တ္ထု စာတွဲလေးပါ။ အားလုံး ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ခံစားကြည့်ကြပါအုံး..။
`သူတော်ကောင်းတို့နှင့် ပေါင်းဖက်လျှင် ပညာဗဟုသုတရသည်။ ဥစ္စာစီးပွား တိုးတက်သည်။ သူယုတ်မာနှင့် ပေါင်းဖက်လျှင် အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်သည်။ ဥစ္စာစီးပွား ဆုတ်ယုတ်သည်။
နေ့လယ်ခင်း ကားစီးရင်း… ။
လိုင်းကားဖြင့် ခရီးသွားရသည်မှာ မလွယ်လှပေ။ နေရာရဖို့ အတွက် တိုးဝှေ့တွန်းတိုက်ပြီး တက်ရသည်။ နေရာ ရတော့ရသည်။ တွဲခိုမတ်တပ် တခဏပေါ့။ ကားခထုတ်ပေးရန် အိတ်ထဲသို့ လက်နှိုက်နေတုန်း `သူတော်ကောင်းတွေ မတောင်းဘဲနဲ့ ပေးတယ်နော်´ ဆိုသည့် ကားစပယ်ယာ၏ ကားခ တောင်းသံကြောင့် ကျနော် လန့်သွားခဲ့ရသည်။ ကားစပယ်ရာ ပြောလိုက်သည့် စကားကို ဆန့်ကျင်ဘက်တွေးလိုက်မိသော် ကားခမပေးဘဲ နေလျှင် ဘာဖြစ်သွားမည်နည်း။
`ဒီနေ့ ဥပုသ်နေ့တော့..။ ရှင်မသိဘူးလား။ ကျုပ်က ဘုရားရှိခိုး၊ ပုတီးစိပ် လုပ်နေတာ။ ရှင့်လို အရက်သောက်ပြီး မူးရူးနေတာ မဟုတ်ဘူး။ အရက်မူးလာရင် မိန်းမကိုပဲ ရန်ရှာချင်တယ်။ ရှင် လူယုတ်မာ …..´
`ဟုတ်ပါတယ်၊ မင်းက သူတော်ကောင်းကြီးကိုး´
`ဟုတ်တယ်၊ ကျုပ်က သူတော်ကောင်း´
ခေါင်းရင်းအိမ်မှ လင်မယား ရန်ဖြစ်နေသံ ဖြစ်သည်။
မနက်စောစော လွယ်အိတ်ဆွဲပြီး အလုပ်ထဲသို့ ထွက်လာခဲ့သည်။ လမ်းသွားရင်း စားဖို့ လမ်းဘေးက အဒေါ်ကြီးဆိုင်မှာ ကွမ်းယာ ၀င်ဝယ်လိုက်သည်။
`အဆိမ့်နဲ့ ကွမ်းတရာဖိုး ပေးပါအဒေါ်´ ဟု ပြောပြီး တရာကျပ်တန် တရွက် ထုတ်ပေးလိုက်သည်။ ကွမ်းယာသည် အဒေါ်ကြီးသည် ကျနော် ထုတ်ပေးလိုက်သော တရာတန်ဖြင့် ကွမ်းပုံနှင့် ကွမ်းယာပစ္စည်းများကို ရိုက်ပုတ်ပြီး `ကဲ…. ကဲ၊ သူတော်ကောင်း ပိုက်ဆံရှင်´ ဟု ပါးစပ်မှ အသံထွက်ကာ လာဘ်ခေါ်နေသည်။
ကျနော် တွေးကြည့်မိသည်။ လူတွေဟာ သူတော်ကောင်းတရားကို မြတ်မြတ်နိုးနိုး ခင်တွယ်တတ်ကြသည်။ ချစ်ခင် စုံမက်တတ်ကြသည်။ သူတော်ကောင်း စိတ်ရှိသူသည် နေရာတရာတွင် မျက်နှာ ပွင့်လန်းနေသည်။ သူတော်ကောင်း အတ္ထုပ္ပတ္တိကား ဂန္ထ၀င် မြောက်ပြီး အလွန် တန်ဖိုး မြင့်မားပါလား ဟူ၍ပင်။
ကွမ်းယာဆိုင်ထဲမှာ ကျနော်ပြန်ထွက်လာတော့ ကျနော်တို့ လမ်းထိပ်က အလှူခံဌာနမှ အသံချဲ့စက်ဖြင့် အလှူခံနေသည်ကို ကြားရပြန်သည်။ `သဒ္ဓါ၊ သီလ၊ သုတ၊ စာဂ၊ ပညာ၊ ဟိရီ၊ သြတ္တပ္ပ ဆိုတဲ့ သူတော်ကောင်း တရားများနဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေ´ တဲ့ဗျာ။
Posted by ကလိုစေးထူး at 10:34 PM0comments
Posted by ကလိုစေးထူး at 9:26 PM4comments
Posted by ကလိုစေးထူး at 7:30 PM2comments